Hordhaca Hordhaca Saameynta Kadib, degello la soo bixi karo iyo tifaftireyaasha | Abuurista khadka tooska ah
Jorge Neira | | Qalabka Naqshadeynta, Khayraadka
Sidaad ogtahay, Adobe After effects waa mid ka mid ah aaladaha ugu wanaagsan ee looga shaqeyn karo berrinka saamaynta gaarka ah iyo soo-saarka dijitaalka ah. Mid ka mid ah soojiidashada ugu waaweyni waa iyada awood u lahaanshaha khalkhalka qaybaha iftiinka ama ka shaqeynta naqshadeynta 3D waxayna sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan isku darsano isticmaalkeeda si dhameystiran qalab kasta oo nashqadeysan oo ka imanaya Adobe. Waxaan si fudud u soo dejin karnaa faylasha qaab .Psd ama .Ai tusaale ahaan oo ka shaqee iyaga, la shaqaynta lakabyada, maaskaro lakabka ah, qaabab isku dhafan ...
Waxaas oo dhan, Adobe After Effects waxay noqon kartaa mid aad waxtar u leh abuurista madax, barnaamijyo intros, fiidiyowyo fiidiyoow ama cinwaanno amaah ah. Kala duwanaanshaheeda iyo la mid ahaanta qalab kasta oo Adobe ah ayaa ka dhigaya aalad aad u macquul ah, in kasta oo heerka qoto dheerida ama kakanaanta sidoo kale ay tahay mid cajiib ah. Marka had iyo jeer way fiicantahay waxay leeyihiin tixraacyo marka la abuurayo mashaariic cusub oo maxaa diidaya, hage lagu shaqeeyo.
Marka waan kaa tagayaa toban intros tafatiri karo oo lagala soo bixi karo taasi waxay kuu adeegi kartaa inay kugu dhiirrigeliso ama aad ka shaqeyso iyaga, wax ka beddesho oo ka faa'iideysato mashruuca la abuuray si loogu daro wax ka beddelid ama xitaa u aragto qaab-dhismeedkooda si aad si fiican u fahamto sida ay u shaqeyso. Aniga shaqsi ahaan, gaar ahaan dhacdooyinkeygii ugu horreeyay ee arjiga, waxay ahayd mid aad waxtar u leh inaan la shaqeeyo mashaariicda wax laga beddeli karo. Qeyb wanaagsan oo ka mid ah xulashada ayaa laga soo saaray bogga Nidaamka DS halkaas oo ay jiraan ilo ku filan oo waxtar weyn yeelan kara.
Intro khiyaali ah
Iron Iron Hologram Intro
Hordhac Shoot Buller
Tamar buluug ah
Magnetyada midabka leh
Biyaha dahabiga ah
Astaan ​​goobeed dhalaalaya
Xadhig iftiin ah
1 Websaydhyada si loo soo dejiyo intros wax laga beddeli karo
1.2 99 arrimo
1.6 Diyaarin mooshin
2 Barnaamijyada loogu talagalay abuuritaanka intros ed
2.3 Lightworks for Windows, MacOS, iyo Linux
2.5 VSDC Tifaftiraha Fiidiyowga ee Bilaashka ah
3 Hordhaca editing ee youtube
3.2 Samee Intro Bilaash ah
Websaydhyada si loo soo dejiyo intros wax laga beddeli karo
Waa muhiim markii la bilaabayo cusub fiidiyow, mashruuc ama bandhig, waxay leeyihiin hordhac tilmaamaya qaabkaaga iyo astaamahaaga iyo hordhaca tayada leh wuxuu qaadanayaa waqti badan iyo aqoon aanan had iyo jeer haysan.
Taas awgeed waxaan leenahay tiro badan oo bogag ah oo aan awoodno soo dejiso tusaalooyinka wax laga beddeli karo.
Mawduucyadan, guud ahaan, waxay leeyihiin tayo sare leh dhowr guji oo keliyana waad ku habeyn kartaa iyaga oo leh astaantaada, qoraallada, iwm.
Hoos waxaan ku tusayaa qaar ka mid ah degelladan internetka leh badan oo lacag la'aan ah iyo premium.
Shaki la'aan, mid ka mid ah kuwa ugu waa weyn ee warshadan. VideoBlocks wuxuu leeyahay in ka badan 7.000 oo sheybaar ah oo la heli karo soo degsasho, oo aad u adeegsan karto dhibaato la'aan maadaama dhammaantood ay leeyihiin ruqsad u oggolaaneysa isticmaalkooda iyada oo aan xaddidneyn.
Iyada oo leh mid ka mid ah liistooyinka ugu waaweyn ee ku yaal Hababka lacag la'aanta ah 99 Mawduucyo ayaa lagu soo bandhigay websaydhka, mid ka mid ah websaydhada ugu fiican ee, marka lagu daro in ay na siiso noocyo aad u ballaadhan, waxay tilmaamaysaa taas maaddadaadu gabi ahaanba waa bilaash isticmaalkaaga. Intaas oo kaliya maahan, waxay sidoo kale na siisaa ikhtiyaar caawimaad oo bilaash ah haddii aan wax su'aalo ah ama dhibaatooyin ah qabno inta aan isticmaaleyno mid ka mid ah tusaalooyinkeeda.
Goob weyn oo aad ka heli doonto noocyo kala duwan oo arrimo ah oo bilaash ah, oo ay ku jiraan gelitaanno leh saameyn aad u wanaagsan.
Mid ka mid ah tixraacyada degellada soo degsashada arrimo, oo leh noocyo kala duwan oo tayo wanaagsan leh oo dammaanad leh, maadaama ay ka tirsan yihiin shirkadda weyn ee Shutterstock.
Marka lagu daro faylalka bilaashka ah, haddii aad miisaaniyad leedahay, hubi inaad booqato aaggeeda xiisaha leh ee Premium oo leh qaybo u dhexeeya qiyaastii. 30 iyo 40 Euros in la beddelo.
Goob aad u qabow oo aad u qabow soo dejiso, in kastoo ma laha sheybaarro bilaash ah intros, waxaa laga yaabaa inaan ka helno qaabka aan u raadinayno soo jeedimahaaga lacag bixinta.
In kasta oo ay tahay degel Websaydh ah oo lagu bilaabo, haddana waxay leedahay arrimo hordhac oo bilaash ah oo laga heli karo buugga ay ku qoran yihiin oo taasi waa waxay leedahay ikhtiyaarro diiwaangelin oo kala duwan, taas oo ka socota ikhtiyaarka bilaashka ah ee kuu oggolaanaysa inaad ku soo dejiso PRO, taas oo ku saabsan qiyaastii 45 euro ay ku siineyso illaa 20 soo dejin bishiiba.
Mid kale oo ka mid ah Rafaa ee videostock, la 23.000 natiijooyin goobeed loogu talagalay hordhaca iyo wadar ahaan ku dhowaad nus milyan feylal oo la heli karo si loo isticmaalo loona dhiirrigeliyo.
Munaasabadan, arrimo la heli karo ayaa la bixiyaa, laga bilaabo illaa 4 Euro si loo beddelo, laakiin iyadoo ay taasi jirto, noocyadu aad bay u badan yihiin, sidaa darteed waxaan kugula talineynaa inaad fiiriso maaddaama qiimaha sicirka uusan weynayn oo waxaad ka heli kartaa qaybo leh tayo iyo saameyn aad u wanaagsan.
Barnaamijyada loogu talagalay abuuritaanka intros ed
IMovie waxaa si gaar ah loogu talagalay Apple oo waa mid ka mid ah tifaftirayaasha ugu dareenka badan ee fiidiyowyada, la jaanqaadi kara dhammaan Mac-yada oo si joogto ah ayaa loo isticmaali karaa.
Software-kii ugu dambeeyay wuxuu oggol yahay kuwa badan fursado horumarsan oo wanaagsan, sida tafatirka 4K iyo qaar video clip ah oo laga helo aaladaha dibada, sida kaamirooyinka GoPro iyo taleefannada gacanta, iyagoo ah wax aan jecel nahay isdhexgalkiisa oo aad u fudud oo la isticmaalo, nadiif ah oo dareen leh.
Qodob kale oo togan ayaa ah inaad wax ka beddeli karto iPhone-kaaga ama iPad-kaaga. Waxa kale oo jira habab kale oo looga dhoofiyo waxyaabo kale YouTube ama Facebook waadna ku samayn kartaa siyaabo kala duwan, tan iyo barnaamijkan wuxuu leeyahay tifaftire aasaasi ah maqal ahaan, marka la soo koobo, tifaftirahaani wuxuu ku habboon yahay sameynta fiidiyowyo guri iyo mashaariic yar yar oo maqal ah.
Qalabkani wuxuu ku jiraa Windows iyo inkasta oo kuma yimaado Windows 10, way fududahay in lasoo dejiso si loo abuuro fiidiyowyo asal ah. Natiijooyinka waxay aad ugu egyihiin kuwa Final CutPro iyo Adobe Premiere Pro.
Waxyaabaha soo jiita dareenkeena ku saabsan Windows Movie Kan sameeyey waxaa macquul ah isku dar fiidiyowyo, maqal iyo sawirro, jar videos oo ku dar saamayn gaar ah. Marka ay timaado in koodhkaaga loo soo raro shabakadaha bulshada way fududahay oo mashruucyada yaryar way wanaagsan tahay, inkasta oo si cad loo arko xaddidaadda xirfadeed markaan isbarbar dhigno xulashooyinka kale ee lacag bixinta.
Lightworks for Windows, MacOS, iyo Linux
Laydhku waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican oo lagu soo daray liiskan, maadaama nidaamkan wax-ka-beddelka fiidiyowga si ballaadhan loogu isticmaalay in lagu soo saaro filimaan heer sare ah sida LA Confidential, The Wolf of Wall Street iyo Pulp Fiction.
Isaga oo si dhow u eegaya astaamaheeda, tifaftirahaani wuxuu leeyahay midabyo hagaajiyayaal, saameyn cabsi leh, qabashada xirfadleyda iyo warbaahinta kale ee asalka ah.
Waxaad haysataa nooc bilaash ah iyo nooc lacag leh si aad u awoodo inaad u dhoofiso faylasha MPED-4 xalka 720p. Lightworks sidoo kale waxay bixisaa qalab kale oo nooc dhaqameed ah inaad soo dejiso, gooyso oo aad wax ka bedesho oo waxa fiican ayaa ah inaad ku samayso qasabno yar.
Tani waa ikhtiyaar kale oo moodle ah oo loogu talagalay tafatirka fiidiyowyada gaagaaban, maadaama aad fursad u leedahay jar, jadwal iyo shaandhayso iyo liiska saaxiibtinimo ayaa kuu oggolaanaya inaad maamusho dhowr hawlood oo muhiim ah.
Faa'iidada kale ayaa ah in aysan boos badan ka qaadan kombiyuutarkaaga, si ka duwan barnaamijyada kale ee liiska ku jira. Waxa kale oo jira kordhino kala duwan si loo badbaadiyo shaqadaada.
VSDC Tifaftiraha Fiidiyowga ee Bilaashka ah
Tani waa a qalab aad u fiican tafatirka In kasta oo aysan ganacsi badan ahayn, haddana waxay leedahay awood aad u ballaaran oo wax lagu hagaajin karo iyo is-dhexgal aad u fudud. Waxaan rabnaa inaan taas kaaga digno taageerada barnaamijkani ma aha mid bilaash ah, laakiin tifaftiraha ayaa leh awood wanaagsan oo uu ku maareeyo iftiinka, isticmaalka miirayaasha, iyo kala guurka kale.
Waxaan jecel nahay softiweer si qurux badan loo qaabeeyey aadna u fudud in la maro. Waa la jaan qaada qaababka AVI iyo MAP4 Si aad saameyn dheeraad ah ugu yeelato fiidiyowga iyo faylasha ka soo baxa, waxaad ku keydin kartaa taleefankaaga gacanta ama qunsuliyada.
Hordhaca editing ee youtube
Youtube waa dhexdhexaadiyaha ugu weyn ee lagu soo bandhigo fiidiyowyada shaqsiyeed ama ganacsi iyo haddii aad dooranaysid inaad sameysid Intros, waa inay noqdaan kuwo tayo fiican leh. Marka xigta, waxaan kuu soo bandhigeynaa bogag iyo barnaamijyo lagu abuurayo Intros asal ah, badankooduna waa lacag la'aan.
Tani waa mid oo ka mid ah boggaga ugu wanaagsan ee lagu abuuro laguna saxo intro intarneedkaaga ee shabakadahaaga bulshada sida Youtube sidoo kale waxaad ku dari kartaa qoraal iyo muuqaal.
Waxaa jira waxyaabo badan oo aad sameyn kartid, sida soo rarista iyo gelinta fiidiyowyo tayo sare leh iyo ikhtiyaar aad ku daawan karto ka hor daabacaadda. Adiguba waxaad leedahay ikhtiyaar ah inaad ku shubato codkaaga qaabab sida MP4 ama nooc kasta oo aad ku heli karto.
Samee Intro Bilaash ah
Samee Intro Bilaash ah sidoo kale waa goob caan ah oo lagu abuuro fiidiyowyo waana bilaash, laakiin tani maahan wax wax u dhimaya muuqaalka xirfadeed iyo xarrago leh, iyadoo waliba aad u fudud in la isticmaalo, waxaad doorataa mawduuc, waxaad doorataa cinwaan, xubno, sawirro, URL, iwm.
Waxaad yeelan kartaa a dib u eegis waxa aad sameyso ka dibna ku soo dejiso kombiyuutarka kala duwan shabakadaha bulshada.
Meel kale oo wanaagsan oo la sameeyo Tafatirka intros oo u muuqda mid xirfad leh. Waad galin kartaa astaantaada, kaarkaaga, dhibcahaaga iyo waxyaabo kale oo badan, marka laga reebo xaqiiqda ah in barnaamijkani yahay mid ka mid ah kuwa aan ugu jeclahay, maadaama aad arki karto fiidiyowga kahor soo dejinta.
Fiidiyowyada Panzoid waxay u muuqdaan kuwo quruxsan, oo leh xirfad aad uwanaagsan oo waxa fiicana ay tahay in cunsur walboo laqasban karo. Qalab ayaa lagu daray Animation 3d taas oo ah wax la aqbali karo, oo ah qalab si fiican u habboon in la isticmaalo.
Sidoo kale software aad u wanaagsan in la abuuro fiidiyowyo oo loo diro Youtube. Dhammaan canaasiirta waa la habeyn karaa waadna cajabin doontaa saaxiibbadaada iyo kuwa raacsan ee shabakadahaaga.
Intromaker.net waxaan uga helnaa iyada tayada marka aad abuureyso intro Iyo xitaa astaamaha dhaqdhaqaaqa iyo sida aaladaha kale ee kor ku xusan, waxaad fursad u leedahay inaad yeelato shaqooyin kala duwan oo loogu talagalay habeynta: astaamaha, fiidiyowyada iyo animations kale, natiijada shaqadu waa mid xirfad leh oo waxa ugu fiican ayaa ah inaad isticmaali karto ilaa laba fiidiyowyada mashruucaaga.
Tani waa bog lagu abuuro Hordhac bilaash ah oo ku siiya suurtagalnimada inaad ku abuurto hordhacaaga Tayo sare oo leh astaamo animated.
Waxay bixiyaan shaqooyin kala duwan sida habeynta astaamaha fiidiyowga ama animations. Intaa waxaa dheer, waxay ku dareysaa taabasho xirfad leh fiidiyowyada, ku guuleysiga natiijooyin wanaagsan, marka laga reebo xaqiiqda ah inay sidoo kale kuu oggolaaneyso inaad u isticmaasho laba fiidiyow mashruucaaga.
Way cadahay inaan dhamaanteen jecel nahay daawado fiidiyowyo iyo filimaan maxaa yeelay waa wax ka madadaalo badan akhriska joornaalka, laakiin habka wax loo saxo waa wax aad u caajis badan oo daal badan, shaqo macnaheedu yahay saacado u heellan iyo daqiiqadaha qaarkood xitaa qaali.
Haddii aad ku dhexjirto hawshan, waxaan rajeyneynaa in dhammaan xulashooyinka kale daabacaadda aan ku siinnay (badankood bilaash ama qiimo aad u jaban), waxaad awood u yeelatay inaad kala soo baxdo intros wax laga beddeli karo ama aad mid ka soo sameysay xoq. Ma taqaanaa qalab dheeri ah si aad u sameysid fiidiyoo fiidiyow ah?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Isbarasho Hordhac ah oo loogu talagalay Adobe Kadib Raadka
cajiib ah ... aad baad u mahadsan tahay ...
Ku jawaab Jennifer
lama soo degsan karaa?
Jawaab ugu wanaagsan1price2014risthian
Ma soo dejisan karo iyaga
ma loo isticmaali karaa iyada oo aan la helin arrimo xuquuqda daabacaadda ah?
hello xagee ka soo dagsan karaa sheylada fiidiyowyada magix
Jawaab ku sii Maricortez Fenoglio
ha soo dejin kaliya na khiyaanee
Ku jawaab majo gonzalez
FIKRADO KU SAABSAN TAAS WAA NOBRE AAD KA RAADSATO PAGE PAGE DUGSIGA
Ku jawaab elMATON